I-FAQS - Ama-Buddhatrends
Ngingakhokha imali ngokudiliva? / Ngingayithola yini imali ngokwami ​​ngoba anginayo ikhadi lesikweletu.
Ngesaba njengoba manje imisebenzi yethu inqunyelwe ukuthengiswa kwekhadi lesikweletu / debit ne-Paypal. Lokhu ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu athola ukuvikelwa komthengi futhi ibhizinisi lethu liqinisekisiwe. Esikhathini esizayo singase sikwazi ukwamukela ukheshi ngesikhathi sokulethwa noma kunjalo. Uma ungenayo indlela yokukhokha njengoba kuchaziwe mhlawumbe ungathola othile ukuthi akusize ngokukhokha kuqala :)
I-Paypal inikeza ukuvikelwa komthengi futhi iyakuthanda abathengi ngokuhlinzeka ngemigwaqo ephephile nemigomo emihle yokubuyisela imali. Yingakho sikhuthaza ukusebenzisa i-PayPal ukuqedela ukuthengiselana kwakho lapha ngokuphepha ngaphandle kwezinkinga zekhadi lesikweletu.
Uma unayo i-akhawunti ye-PayPal, hlola nje nge-Paypal futhi ungene ngemvume ukuqedela ukuthenga kwakho ngokufanele.
Kuthiwani uma ngingenayo i-Akhawunti ye-Paypal ?!
Ungakhathazeki ngoba awudingi ukuba ne-akhawunti ye-PayPal ukukhokha: ungangena idatha yakho yekhadi lesikweletu ngokuqondile ku-PayPal bese uqedela inkokhelo yakho. Wenaakudingeki ubhalise i-akhawunti ye-PayPal.
I-1) QINISISA "PAYELA NOKUKHETHA KANYE NOMA IKHADIDI IKHETHA" UKUKHETHA
Uma ikhasi lakho le-PayPal libukeka ngale ndlela, mane uchofoze ku-"Khokha ngeDebit noma Credit Card" noma "Hlola njengendwendwe".
I-2. FUMA IZIMBONO ZAKHADI ZESIKHATHI SOMKHAYA
Ikheli, i-imeyli nenombolo yocingo kungacelwa futhi kuye ngokuthi izwe lakho.
Uma usuqedile, chofoza ku- "Buyekeza futhi Qhubeka".
I-3. Cindezela "THOLA MANJE"
I-4. Cindezela "CHA, THANKA" NOKUBA BENZEKWA NGOKUTHUTHA UKUTHOLA I-ACCOUNT PAYPAL. UMTHETHO WAKHO UFULELE!
YENZEKA! UZOKUTHOLA UKUQHUBEKA KWEMITHETHO YAKHO EMAIL UKUFUMA UKUFAKA KWAKHO! Jabula ukuhambisa :)
Inqubomgomo yethu yokubuya ihlala Izinsuku ze-30 kusukela ngosuku othola ngalo umkhiqizo (IE ungene ngemvume kusuka enkonzweni yangakini yeposi). Uma izinsuku ezingu-30 ziphelile kusukela, ngeshwa asikwazi ukukunikeza ukubuyiselwa imali noma ukushintshaniswa.
Uma iphutha lisiphezu kwethu (ukuxuba, ukuphutha ekufikeni), sizobe sesikhokhela ukubuyisela emuva :)
Ukuze ufanelekele ukubuyiselwa, into yakho kumele ingasetshenzisiwe futhi esimweni esifanayo ukuthi uyitholile. Kumele futhi kube emaphaketheni okuqala.Ukuqedela ukubuyela kwakho, sidinga irisidi noma ubufakazi bokuthenga.Sicela ungathumele ukuthenga kwakho kumkhiqizi. Sicela uqaphele ukuthi ukubuyisa izimali zokuposa ngeke kuhlanganiswe nathi. Sincoma ukuthumela i-imeyili ithimba lethu lokusekela ngemininingwane egcwele yokuphenywa.
Ukuze i-Order Return ibuze, sicela uxhumane nathi ngefomu lokuxhumana kusayithi lethu
Lapho uthenga ukuthenga kwakho, uzoba namahora we-24 ukukhansela i-oda lakho. Sizobuyisela imali egcwele uma ukhansela i-oda lakho phakathi kwamahora we-24. Kodwa uma amahora we-24 edlulile kusukela lapho wenza umyalelo, kuzodingeka ulinde ukuthi iphasela lakho lifike ngaphambi kokuthi ungawabuyisela kithi.
Uma uvunyiwe, imali yakho iyobuyiselwa, futhi isikweletu sizosetshenziswa ngokuzenzakalelayo ekhadini lakho lesikweletu noma indlela yokukhokha yasekuqaleni, kungakapheli inani elithile lezinsuku kuye ngokuthi umthengisi wakho wokukhokha.
UKUHLELA KANYE NOMA UKUQHUBEKA
Uma usuwenzile konke lokhu futhi ungakayitholi imali yakho, sicela uxhumane nathi ngefomu lokuxhumana kusayithi lethu
Q- Ikhodi yokuposa inesibopho sokubeka umyalelo kodwa anginayo ezweni lami. Ngingafaka kanjani i-oda?
A- Uma ikheli lakho lingenayo ikhodi yeposi engena ngomusa "11111" bese ubeka i-oda lakho evamile. Ngale ndlela, sizokwazi ukuthi ayikho ikhodi yeposi yokufaka
Ama-oda ngokuvamile athatha izinsuku ezingu-5 ukuze asebenze ngaphambi kokuba athumele - ngaphandle kwamaviki namaholidi. Ngesikhathi samaholidi ukucubungula izikhathi kungathatha izinsuku ezingu-14.
Ama-oda we-US azothunyelwa nge-USPS ne-International Orders azothunyelwa kuye ngokuthi indawo yokugcwalisa umkhiqizo uvela.
I-Transit Times eya e-United States: I-5 - Izinsuku zebhizinisi ze-20
Kunezimo ezingenakulawulwa (izinhlekelele zemvelo, amaholide, isimo sezulu, njll) esingabangela ukuhlehliswa kokuthumela. Nakuba amaphakheji amaningi azofika ngesikhathi, kungase kube khona izimo nokulibazisa ukuthi abathwali bethu bangase bahlangabezane nazo. Ngenxa yalesi sizathu, asiqinisekisi isikhathi esiqondile sokudiliva; ukudiliva inkinga kuwumthwalo wenkampani yokuthumela.
Ngingayithola I-NUMBER yokulandelela?
Umkhiqizo ngamunye ungathunyelwa kusuka ezikhungweni ezahlukene zokugcwalisa emhlabeni wonke njengoba ithimba lethu locwaningo lomkhiqizo lichitha isikhathi sokuveza ikhwalithi kodwa nemikhiqizo engabizi. Ngenkathi singakwazi ukuhlinzeka ngokulandelela imikhiqizo yakho, inkampani yethu isiqinisekisiwe ngokugcwele emaphakheji nanoma yiziphi izinto ezilahlekile zizokhishwa mahhala kuwe.
LOKHO OKUSEBENZISWA NGOKUSEBENZISWA
Inkonzo ye-courier empeleni incike esikhungweni sethu sokugcwaliseka. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo wethu utholakala emazweni ahlukene ukuqinisekisa ukuthi uwuthola intengo engcono kakhulu. Izinsizakalo ze-courier ziyahlukahluka ezweni lonke. Ngaphandle kokusungulwa kwebhizinisi elinamandla ne-courier service asikwazi ukuthola amazinga ashibhile ngaleyo ndlela ngesivinini esizolahlekelwa yizimakethe zomhlaba ezifana ne-Amazon nokunye.
Senza konke esingakwenza ukuze sinciphise izindleko ekugcineni kwakho ukuze ungakhokhi intela / amaphrimiyamu aphezulu ukuze uthole izinto zakho! Uma ubeka i-oda kanye nathi ngezinto eziningi, cishe cishe kuzothunyelwa kuphakheji engaphezu kweyodwa. Sicela uvumele isikhathi sokuba zonke izinto zakho zifike.
Amanani adalulwe ekwamukeleni kwakho KUNYE behluke kulokho oye wayala kodwa sicela ungakhathazeki! Ngokujwayelekile ukuthi isikhungo sethu sokugcwaliseka sizokwenza ukuphawula njengamanani aphansi kakhulu noma ukubeka izinto njengezipho ngokuphelele. Lokhu ukuvimbela amanani / imisebenzi yangaphandle yokungeniswa okufakwe ekupheleni kwakho njengamazwe athile lezi zindleko ezengeziwe zibiza kakhulu.
Noma ubani ekhaya angathola iphakheji egameni lekhasimende. Ngokuvamile umthumeli uzoshiya isikhwama sokuqoqa uma kungekho muntu ekhaya futhi ungase uqoqe iphasela lakho eposini eliseduzane nawe.
Nakuba sikhuthaza kakhulu ukuthi ubuke kabili ubukhulu namakheli ngaphambi kokubeka umyalo nathi, siqonda ngokugcwele ukuthi izinto zivela futhi amaphutha angenziwa. Siyacubungula imiyalo ngosuku olufanayo ababekwe ngalo. Uma ushintsho ludingeka lenziwe ku-oda yakho sicela uxhumane nathi ngefomu lokuxhumana kusayithi lethu I-ASAP futhi sizokwenza konke esingakwenza ukuze senze lolo shintsho, kodwa asikwazi ukwenza izithembiso. Uma ngabe izinto (s) sezivele zithunyelwe kusuka esikhungweni sethu sokugcwaliseka asikwazi ukwenza izinguquko ku-oda. Uma kunjalo, ungathumela into engafanele ku-Warehouse yesifunda eliseduzane futhi lapho sithola khona singathumela into eqondisiwe. Sicela uxhumane nathi ukuze uthole ukuthi yikuphi indawo yokugcina yesifunda eseduze nawe evela ezweni lakini.
Sicela uxhumane nathi futhi sizojabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo yakho :)